अहिले हटें भने नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्दैन, भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ: प्रधानमन्त्री
अहिले हटें भने नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्दैन, भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ: प्रधानमन्त्री 'नेपाल र भारतका शक्ति लागेर हटाउन खोजेका छन्'
नेपाल लाइभ आइतबार, असार १४, २०७७, १५:२९
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूलाई हटाउन नेपालदेखि भारतसम्मका शक्ति लागिपरेको बताएका छन्।
मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा छापेवात केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन भन्ने बसह चलेको बताए।
'मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन तर यही बेलामा हट्ने हो भने नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन। किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ', उनले भने, 'त्यसैले मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि र आफ्ना लागि होइन देशका लागि काम गरेको हो।'
उनले हप्ता / पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ भारतमा भएको बहस भएको भन्दै भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नागरिकताधारी नै भारतको पक्ष लागेको बोलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'अनेक प्रश्न यताका नागरिकताधारीहरुले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्तीमा नेपाली छ तर अर्काको पक्ष लिएको छ। उनीहरु प्रमाण हेर्दैनन्। नक्सा छापेपछि अब झन् गाह्रो हुन्छ भनिरहेका छन्', ओलीले सोधे, 'गाह्रो के हुन्छ? जमिन गएको थियो, त्यो फिर्ता ल्याउन खोज्दा गाह्रो हुन्छ भनेको के हो?'
उनले आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन खोजेको र अर्काको जमिनमा दाबा नगरेको स्पष्ट पारे।
'नेपालमै पनि पहिले केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन भन्ने बहस चलेको छ। संविधान संशोधन र नक्सा जारी गरेर अपराध गर्ने केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन भनिरहेका छन्', उनले भने, 'बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई, दिल्लीका सञ्चार माध्यम सुन्नुस्, त्यसैले संकेत गर्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ। यहाँका होटलहरुमा भएका गतिविधिहरुले पनि देखाइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियताले पनि देखाइरहेको छ।'
उनले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर नभएको स्पष्ट पारे। 'संविधानमा नक्सा सामेल गरेवापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। कोसिस गर्नेलाई गर्न दिऔं तर हिजोको जस्तो होइन।'